Famantarana 9 mazava fa mifanentana amin'ny sakaizanao ianao - Fifandraisana
Hatraiza ny maha-zava-dehibe ny fifanarahan-tsaina eo amin'ny fifandraisana?
Ny valiny dia: azo antoka fa mahasoa ny fifandraisana izany, saingy tsy ilaina 100% izany.
Misy ohatra tsy tambo isaina ho an'ny mpivady izay tsy mitovy fitoviana ara-tsaina izay mitazona fiaraha-miasa mahasambatra sy salama ary indrindra indrindra.
Izany dia satria ny fampifanarahana dia miasa amin'ny faritra maro manerana ny fifandraisana (ara-pihetseham-po, ara-panahy, ara-batana, ara-tsosialy, sns.) Ka ny fatorana miavaka amin'ny faritra iray dia mety mora kokoa noho ny tsy fitoviana hafa.
Rehefa mivoatra ny fifandraisana dia misy antony maro eo amin'ny filalaovana ary ny fitambaran'ny karazana toetra dia mila fanentanana samihafa hamoronana fifandraisana miasa tanteraka.
Ary avy eo misy ny vokatry ny simia taloha be manampy amin'ny fifangaroana!
Na izany aza, ny zava-misy fa nanindry ity lahatsoratra ity ianao dia manondro fa mety ho olona mahatsapa ho voajanahary fa ny fiasan'ny halavan'ny halaviran-tsaina mitovy amin'ny vady aman-janakao no zava-dehibe aminao.
Angamba ianao dia eo am-pifandraisana izao miaraka amin'ny olona izay endrika ivelany tonga lafatra, izay mitsabo anao tsara, fa misy zavatra tsy azonao apetraka amin'ny rantsan-tànanao fotsiny izay mitazona ny zavatra ho ambonin-javatra.
Tsy misy lalina ary tsy misy marina fifandraisana.
Matetika dia mitranga izany matetika rehefa mizotra mankamin'ny dobo filomanosana ianao.
Ny fiezahana hamantatra ny antony tsy fananan'olon-droa fifandraisana misy anao 'zavatra sasany' mety hanome anao fiadanan-tsaina.
Mampahafantatra ny tenanao ny sasany amin'ireo famantarana ny mifanentana ara-tsaina amin'ny fifandraisana, noho izany, dia misy dikany betsaka.
Arakaraka ny isan'ny famantarana ireo hitanao amin'ny fifandraisanao ireo, dia vao mainka mifanentana tsara ianao sy ny vadinao.
1. Mifampianatra ianao.
Ny fananana fahalalana sy fahaiza-manao mifameno nefa vonona ny hianatra amin'izy samy izy dia famantarana lehibe amin'ny fampifanarahana ny fahaizana.
Raha tsy misy finiavana na hampianatra na hianarana, dia lasa sakana eo aminao ny elanelam-pahalalana fa tsy mpanamora fahalalana.
Ny valiny dia ny mpiara-miasa iray mahatsiaro tena ho ambany na ambony noho ny iray hafa izay miteraka vato mahatafintohina amin'ny fifandraisana rehetra.
Farany, ny fiaraha-miasa dia lasa mizarazara amin'ny mpiara-miasa iray mitana ny andraikitry ny 'mpampianatra' ary ny iray kosa lasa 'mpianatra.'
Ny firindrana ara-tsaina dia miankina amin'ny fifandanjana tsaratsara kokoa izay ahafahan'ny mpivady misokatra mifampianatra, mamela ny tsirairay hitombo rehefa matotra ny fifandraisana.
2. Mety ho sarotra ny resaka - fa amin'ny fomba tsara.
Ny fifandraisana amin'ny ambaratonga tsirairay dia fepetra takiana amin'ny fifandraisana feno.
Noho izany dia ilaina ny manaitaitra ny resadresakao ary tsy hianjera amin'ny lahateny kely tsy misy farany ianao na mitazona lohahevitra ambonimbony.
Rehefa vao manomboka amin'ny fifandraisana ianao dia ara-dalàna tanteraka io - tsy maintsy manomboka any amin'ny toerana hafa ny resaka, sa tsy izany?
Raha vantany vao niara-nanodidina ny sakana ianao, dia ho hitanao fa ny resakao dia mandrakotra lohahevitra marobe kokoa ary lasa mandrisika sy misy dikany kokoa.
Ireo vitsy vintana dia hahita fa mitsambikina mihoatra ny ambaratonga ambonimbony avokoa izy ireo ary tafapetraka hatrany amin'ireo lohahevitra mampihomehy, mikaroka lohahevitra lalina sy mahafa-po kokoa tamin'ny andro voalohany.
Ny resadresaka eo amin'ny mpivady mifanentana ara-tsaina dia manentana ny fanahy ary indraindray sarotra rehefa mandinika lalindalina kokoa ny zavatra inoan'ny tsirairay sy ny rafitra manome lanja ianao ary amin'izay dia hampivelatra ny fahatakaranao bebe kokoa ny antony mahatonga anao roa hifidy.
Raha tokony hiteraka fifandirana, ny sparring am-bava izay mety hitranga amin'ny resaka toy izany dia manamafy ny fifandraisanareo.
Aza atao ambanin-javatra ny hasarobidin'ny resaka mifototra amin'ny fahasambarana ankapobeny. Fianarana iray manolotra rohy misy eo amin'ny fiadanam-po sy ny fifanakalozana vava misy dikany.
Toa izany no mahatonga ny fiainana feno resaka kely tsy mahafa-po.
3. Manaja ny zon'ny tsirairay ianareo hanana fomba fijery hafa.
Ao amin'ny mpivady tsy mifanaraka amin'ny ara-tsaina, ny tsy fitovian'ny hevitra mazava dia hamaky faingana ny tsipika diso ao amin'ny fifandraisana.
Na izany aza, raha samy matoky ny heviny manokana ny roa tonta, nefa manaiky ary mamporisika ny hevitry ny mifanohitra aminy aza, dia lasa hery izany.
Izany dia miverina amin'ny teboka teo aloha momba ny maha-zava-dehibe ny resaka misy dikany ho an'ny mpivady mifampiresaka ara-tsaina.
Ny fijerena ny zoro amin'ny lohahevitra sarotra, izay atokisan'ny roa tonta amin'ny zon'izy ireo hitazona fomba fijery hafa, dia mitarika fifandraisana serebral lalindalina kokoa sy mahafa-po ary fifandraisana akaiky kokoa.
Ny mpivady manana fifandraisana am-pahefana marina dia mahatakatra fa ny fomba fijerin'ny olona iray dia tsy tsara kokoa noho ny iray hafa, ary ny fizarana fomba fijery tsy mitovy dia mamela ny fitomboana sy ny fianarana samy izy ary manampy ny fahaverezan'ny fifandraisana.
4. Tsy mankaleo mihitsy amin'ny namanao ianao.
Raha manome valisoa ara-tsaina ny fotoana laninao miaraka amin'ny namanao ary tena liana amin'ny zavatra lazainy ianao, ny lohahevitra nofidiny horesahina, ary ny fialam-bolin'izy ireo voafidy, dia mety tsy ho ianao mankaleo amin'ny fiarahanareo .
inona no nitranga tamin'i wendy williams dj
Raha toa ka mahita ny tenanao manatona ny namanao sy ny fianakavianao ary ny olon-kafa ianao amin'ny fanentanana toy izany, dia hampiakatra saina mena izany satria misy zavatra tsy hita mazava eo amin'ny fifandraisanareo.
Tsy very ny zava-drehetra raha izany no izy.
Ny fiezahana mitady zavatra mahaliana hafa - ny fanatanjahan-tena, ny dia, ny sakafo, ohatra, dia afaka manatsara ny fifandraisanao ary manome anao zavatra tena misy lanja zaraina.
Izy io koa dia mety hampihena ny fahatsapana fahasosorana vokatry ny tsy fitovian'ny fahaizanao.
Raha mifanentana ny fialam-boly tianao dia ahena ny fahafaham-po anao na tsy fahafaham-po amin'ny fifandraisanao.
Ohatra, raha mizara fitiavam-pamakiana ianao na samy mankafy teatra ankehitriny, dia tsy ho be ny resahina, fa koa ny fifandraisana ara-tsaina lalina.
5. Tsy misy fahatsapana fifaninanana eo aminao.
Ny mpivady iray mifanentana amin'ny fahaiza-manao dia tsy hahatsapa ho toy ny mila mifampika isa.
Mifanohitra amin'izany, ny mpivady izay misintona tsy tapaka ary matetika dia miseho ho toy ny fahavalo kokoa noho ny mpiray dina dia tsy dia mitovy amin'ny halavan'ny halaviran-tsaina.
Eny, indraindray mety ho mahafinaritra ary na dia milalao fo aza mba ho mifaninana kely, fa mety hitafy koa raha io no toerana misy anao ao amin'ny fiarahanareo.
Tsy ilaina ny mifampatanjaka ati-doha tsy an-kijanona hanaporofoana ny fitovizanao ara-tsaina.
Ny mari-pamantarana tsara ny faharanitan-tsaina dia ny fahaizana miresaka amin-kitsimpo, amin'ny fomba malalaka ary amin'ny fomba feno fanajana.
Izany dia tsy mitaky fihomehezana volo amin'ny teny mandreraka - raha tsy, mazava ho azy, samy mieritreritra ianareo fa mahafinaritra izany.
6. Manatsara ny fahatokisanao tena ny olon-tianao.
Ny fahatokisan-tena dia zavatra marefo ary ny famantarana tsara ny firindrana ara-tsaina dia ny fahatsapanao ny fahatokisanao tena ao amin'ny orinasan'ny namanao.
Tokony hahatsapa ho afaka mamoaka ny hevitrao ianao nefa tsy matahotra sao ahitsy na tsaraina.
Tsy tokony hisy lolom-po, fialonana, na fitaintainanana eo aminao, ary tsy tokony hahatsapa ho toy ny hoe simbaina na apetraka am-bavany ny fahamendrehanao.
Ny fahaizanao ara-tsaina dia tsy hahatsapa ny filana manelingelina, manazava be loatra na mametraka anao ambany.
vaovao farany momba ny mpiasa
Raha, etsy an-danin'izany, dia misy loatra ny fisarahan-dramatoa lehilahy na vehivavy - mahatonga anao hahatsapa ho voatohana na manambany anao - mety mila manontany ianao raha mifanentana tsara amin'ny sainao.
7. Mizara mitovy, na mitovy, ny tsiro amin'ny mozika.
Misy zavatra momba ny mozika mifandray amin'ny ambaratonga lalina kokoa ara-pihetseham-po amin'ny olombelona olombelona.
Matetika kokoa, ny olona mahay mifanaraka amin'ny saina dia mankafy ny fomba mozika mitovy amin'izany, satria izy io dia samy mihaino azy roa tonta amin'ny lafiny ara-pientanam-po.
Raha firenena maro ianao, noho izany, ary ny sakaizanao dia momba ny vy mavesatra amin'ny lohan-doha, betsaka ny vintana mety hialana amin'ny fahalalanao.
Mety tsy marina maneran-tany anefa izany, satria maro ny mpivady no miroborobo na eo aza ny fahitana azy amin'ny mozika tiany. Ny lakilen'ny fahombiazana amin'ny tranga toy izany dia ny fanajana ny tsy fitovizany.
Ny antoko tsirairay dia omena toerana sy fotoana hankafizana ny karazana mozika tiany nefa tsy misy fitsarana.
OK, mety mila manaram-po amin'ny tenany samirery izy ireo, na miaraka amin'ireo mpankafy namany (satria tsy tokony hisy terena hihaino mozika mametaka ny hozatra na mampivoa-dra ny sofiny), nefa izany dia ekena am-pifaliana eo anelanelan'izy ireo.
8. Mitovy ny haavon'ny fahalianana hahalala zavatra vaovao (na tsia).
Ny olona sasany dia liana te hahafantatra na miaina zava-baovao noho ny hafa.
Angamba manana filàna toy ny spaonjy ianao hahazoana fahalalana, na angamba mitady tsy tapaka ny kolontsaina manaraka ianao.
Etsy ankilany, mety ho afa-po ihany ianao amin'ny 'ho', tsy mangetaheta zavatra manokana.
Tsy maninona izay mihatra aminao, satria na ny iray na ny iray hafa dia ny fomba ‘marina’ hiainana.
Tsy sarotra ny mahita fa ny olona mitady fientanam-po dia mety tsy mpiara-miombon'antoka antonony ho an'ny olona izay tsy faly noho ny rehefa ao an-trano miaraka amin'ny tongotr'izy ireo manoloana ny fahitalavitra .
Toy izany koa, ny mpamaky mazoto ny boky tena misy dia tsy ho tonga saina ara-tsaina tanteraka amin'ny olona mandany fandaharana amin'ny fahitalavitra amin'ny andro sy fahitalavitra misy.
Indray mandeha indray, tsy diso ny roa, fa ho an'izay rehetra ilaina ny zing intelektualy dia manampy ny mpiara-miasa roa hanana faniriana mitovy.
Ny zava-dehibe raha ny fahaizan'ny mifanentana ara-pahalalana dia ny hitovizanareo roa tonta.
9. Ny fifandraisanao dia tsy resaka ara-batana fotsiny.
Ny filalaovana sy ny foreplay dia mahafinaritra tsy azo lavina ary ny firaisana ara-nofo mahaliana dia ny ankamaroan'ny olona, ​​iray amin'ireo lakilen'ny fifandraisana akaiky.
Izany dia nilaza fa ny fifandraisana misy eo amin'ny ara-tsaina dia tsy manomboka ary mifarana ao amin'ny efitrano fatoriana.
Momba ny anton-javatra rehetra voalaza etsy ambony sy ny maro hafa.
Raha manandrana mifandray amin'ny sehatra ara-pientanam-po ny mpiara-miasa iray, raha ny iray kosa mifantoka bebe kokoa amin'ny ara-batana, dia mety hanoratra olana izany.
Mety ho famantarana iray izany fa ny firaisana dia ampiasaina hanonerana ny tsy fisian'ny fifandraisana ara-tsaina.
Ny mpiara-miasa iray dia tsy afaka mirotsaka amin'ny ambaratonga cerebral kokoa ary noho izany dia miverina amin'ny fifandraisana ara-batana voazaha toetra.
Izany, isaky ny tsy olana, fa mety hanondro ny filana hitrandrahana ny sasany amin'ireo faritra hafa amin'ny fifanarahana mba hahazoana antoka fa tena mifaly amin'ny fifamatorana amin'ny lafiny hafa ny fifandraisanareo.
Mbola tsy azonao antoka raha mifanaraka amin'ny fahaiza-manao ianao sy ny olon-tianao? Miresaka an-tserasera amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy anao hahalala zavatra. Tsotra.
Fialamboly 100 ho an'ny mpivady hiaraha-miasa: ny lisitra faratampony!
Fomba hisafidianana eo anelanelan'ny bandy roa: fomba 11 hanaovana fanapahan-kevitra tsara
tsy manam-potoana ho ahy ianao
Hall of laza malaza
ahoana no tsy dia mifikitra amin'ny fifandraisana
shit hatao rehefa mankaleo
tiako ny vadiko fa tsy tia ahy izy